November 10 ~ विज्ञान संसार
Posted by Om Bhandari On 8:50 PM
हामी सबैलाई गितहरू मन पर्दछ । विशेषत गायकहरूको अत्यन्त सुरिलो स्वरले हामिलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । तर सबै मानिसमा समान स्वर भने हुदैन । व्यक्ति पिच्छे फरक फरक स्वर हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ त ?
हामी सबैको घाँटीमा स्वर निकाल्ने यन्त्र भोकल कर्ड हुन्छ । यसमा १६ वटा लचिला मांसपेशीहरू हुन्छन् । तिनले झण्डै १७० किमिमका अवस्थाहरू प्रदर्शित गर्न सक्दछन् । आवाज निस्कनु भनेको हावाले ती मांसपेशीलाई चालाई कम्पन पैदा गर्नु हो । कम्पनको तौर तरिका अनुसार नै आवाज उत्पन्न हुन्छ । गाउनेहरूको स्वरयन्त्रको मुख्य विशेषता रिजोनेटिङ स्पेस अथवा स्वर घन्कने ठाउँ हो । उनीहरूमा यस्तो ठाउँ संगित उपकरणहरूको ढ्वाङगले जस्तै काम गर्छ । यसबाहेक गायक गायिकाहरूले आफ्नो स्वरलाई कसरी नियन्त्रण राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि सिकेका हुन्छन् ।
हामीहरु कसरी देख्न सक्छौ ?
फोटोकपी मेसिनले कसरी कार्य गर्दछ ?
छाला र मस्तिष्क बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
हाम्रो आँखाले रङको पहिचान कसरी गर्छ ।
चङ्गा कसरी उड्छ ?
तारा (Star) किन चम्किन्छ ?
महिलाको दाह्री जुँगा किन आउदैन ?